I-China i-100% ye-bamboo yendalo eVuselelweyo yokuCola ukuCola kunye neMveliso | Gianty
Ukuchetywa kwe-bamboo-e-friendly kuyindlela yokuqala kwaye ekuphela kwendlela yokuphosa ilahleko eyenziwe kwi-bamboo eqinisekisiweyo, enokuhlaziywa. Inobuhle kwaye yomelele. I-100% yethu ye-compost ye-cutlery efanelekileyo iya kulungela naliphi na itheko.
Isitshixo se-bamboo senziwe nge bamboo yendalo ecocekileyo. I-bamboo zezona zinto zihlaziyiweyo emhlabeni. Kuvunwa kwaye kwenziwa ubuchwephesha ngokuzinzileyo. Beka ugxininiso kulonwabo lwendalo, ukunambitha kunye namava ngokusika i-bamboo cutlery. Ezi cutlery zenziwe ngohlobo oluhle zihlala kakuhle esandleni kwaye zilungelelana ngokugqibeleleyo ngaphakathi kwimbonakalo yepulasitiki engenasiphako. Eyona asethi yokwenene yendawo yesitali, kwiminyhadala yokutya kunye neminyhadala, kwiziza zenkampi nangexesha lokudla kunye namabala egadi. Ayikwazi ukusebenzisa ukutya i-ayisikhrim kuphela, ikhekhe kodwa kunye nokutya kwesitayile yasentshona njenge-noodle kunye nesaladi. I-100% yethu ukunqunyulwa komzimba kukhetho olufanelekileyo lokugqibela, imfashini kunye nokusingqongileyo.
I-Forest Stewardship Council (FSC), ngumbutho ongenzi nzuzo obeka imigangatho ethile ephezulu yokuqinisekisa ukuba amahlathi enziwa ngendlela enoxanduva kwindalo nokusingqongileyo. Ukuba imveliso ibhalwe njenge "FSC Certified," oko kuthetha ukuba iinkuni ezisetyenzisiweyo kwimveliso kunye nomenzi wazo ezenze zahlangabezana neemfuno zeKhansile yeNtloko yeHlabathi.
Isatifikethi se-FSC sithathwa njengommiselo "wegolide" weenkuni ezivunwe kumahlathi alawulwa ngendlela eyiyo, eyinzuzo kuluntu, eyazi ngokusingqongileyo, kwaye isebenza kakuhle kwezoqoqosho.
Iipakethi kwinqwelo nganye Iipakethi ezili-10
Ubungakanani bebhokisi 22 * 18 * 19cm
Into Ifoloko yamanzi
Ubungakanani bebhokisi 25 * 18 * 23cm
Into Isipuni se bamboo
Ubungakanani bebhokisi I-24 * 18 * 26cm
Edlulileyo: Umzi-mveliso unikezwe isixhobo sokusika isiqwenga esi-4 seCPLA-I-CPLA engasetyenziswanga yokuSusa isitya enokulungiswa kwakhona-ibhegi engagungqiyo - iGianty
Okulandelayo: I-Birchwood FSC yendalo Ukuphinda ibuyeke uComplery
I-Birchwood FSC yendalo esiVumelekayo ukuba isikwe eCompost ...